चैत २४, काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो ।
तर लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका अधिकारीले बाजी मार्नुभयाे ।
आजभन्दा पाँच वर्षअघि राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर पद खाली हुनैलाग्दा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित तीनजनाको नाम गभर्नरको लागि सिफारिस भएको थियो। सिफारिसकर्ता थिए तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत । एक डेपुटी गभर्नर सहित कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नै पर्ने प्रावधान अन्तर्गत उहाँको पनि नाम सिफारिस भएको थियो ।
तर, त्यतिबेला डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नरको बाजी मार्नुभएकाे थियाे ।
त्यतिबेला डा. नेपाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्थ्याे । प्रधानमन्त्री हाबी हुने गभर्नरको नियुक्ति प्रकृयामा त्यतिबेला नेपालले नै बाजी मारेपछि अधिकारीको गभर्नरको दौड केही समयको लागि रोकियो । उहाँको डेपुटी गभर्नरको पद बाँकी नै थियो । गभर्नरका प्रतिस्पर्धी नेपालसँगै दुई वर्ष काम गरेर अधिकारी ०७३ सालमा डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पूरा गरी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिनु भयाे ।
अधिकारीले त्यसको पाँच वर्षपछि अहिले गभर्नरको दौडमा बाजी मार्नुभएकाे छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद‍्ले अधिकारीलाई अबको पाँच वर्षको लागि राष्ट्र बैङ्कको नयाँ गभर्नरको रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
राष्ट्र बैंक #गभर्नर #महाप्रसाद